Fiarovana, fiarovana ary tsiambaratelo ny fanaovana banky ivelan'ny tanàna & inona no tadiavina
Banky fiarovana sy fiarovana
Banky Offshore hoatran'ny hevitra natokana ho an'ny mpanankarena indrindra ihany. Ny tena marina dia hoe malalaka kokoa sy mora kokoa noho ny olon-tsotra no mino azy io. Ka inona ny mikasika ny banky any ivelany izay mahasarika ny olona azy? Eny, rehefa mikaroka ny valiny ianao dia hahita fa tsy sarotra izany araka ny eritreretinao. Ny kaonty any ivelany dia manome tombony betsaka amin'ny banky an-trano. Betsaka ny banky any ivelany izay manome filaminana bebe kokoa, fitomboana manokana ary fahalalahana ara-bola lehibe kokoa sy mora kokoa noho ny banky an-trano. Ity loharanom-pahalalana mahasoa ity dia hanolotra anao torohevitra sy fambara ary fomba fijery vitsivitsy momba an'ity tranga ity.
Inona ny Banky Offshore?
Ny banky any ivelany dia mitovy ihany. Izy io dia banky amin'ny andrim-pananana iray izay mipetraka any ivelan'ny firenena onenanan'ny tompon-toerana. Ny banky any ivelany dia tsy voafetra ho an'ny firenena kely toa an'i Belize, ny Caymans, ary ny Cyprus ihany. Ahitana ny firenena toa an'i Shina sy firenena Eropeana, anisan'izany ny Soisa, Holandy, ary Belzika any an-kafa. Ny firenena tsirairay dia manana ny fanjakany izay mifehy ny fomba fiasan'ny bankiny. Saingy amin'ny farany dia mirona hanatanteraka zavatra mitovitovy amin'izany ihany izy ireo. Anisan'izany ny tontolo mifehy izay manampy amin'ny fiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana ny banky. Fanampin'izay, izy ireo dia mampiasa rafitra ilaina amin'ny fanampiana hitazomana ireo olon-dratsy.
Dia tena manome tombony ho anao ve ny banky any ivelan'ny taninao?
Ny valin'io fanontaniana io dia eny, maro ny tombontsoa amin'ny fanokafana kaonty any ivelany. Iray amin'ireo tombontsoa lehibe sy sarobidy indrindra amin'ny banky any ivelany ny tsiambaratelo. Any Etazonia, ohatra, dia misy lalàna sahala amin'ny lalàna US Bank Secrecy of 1970. Taty aoriana dia tonga ny lalàna amerikanina PATRIOT. Ataon'izy ireo mora be ny mahita ny mombamomba ireo tompona kaonty amin'ny banky an-trano. Izany dia mahatonga ny tsiambaratelo amin'ny banky any amin'ny banky eo an-toerana saika tsy misy mpino.
Ny fitsipika mifehy ny banky any amin'ny firenena maro, ny mifanohitra amin'izany, mitazona ny ny fiainana manokana momba ny kaontiny amin'ny fomba ambony indrindra. Araka izany, ny banky any amoron-tsiraka any amin'ny faritany maro dia tsy adidy hamerina ny mombamomba ny tompon'ny kaonty. Mazava ho azy fa misy lafin-javatra manokana, toy ny raharaha mahery setra toy ny fampihorohoroana, ny fivarotana an-tsokosoko, na ny fanodinkodinana vola. Ity haavon'ny fiainana manokana amin'ny banky any ivelany ity dia tsy fenitra indostria fotsiny. Saingy misy ny lalàna any amin'ny firenena maro izay manery ny tsiambaratelo sy ny tsiambaratelo momba ny tompona kaonty. Mety izany ho an'ny olona manana fananana tadiavin'izy ireo hiaro amin'ny fitsarana sivily.
Banky Offshore ho an'ny fiarovana ny lalàna
Araka ny American Bar Association ao 2006, Etazonia dia fonenan'ny mpisolovava iray tapitrisa mahery. Ankoatr'izay, ny sipa sivily dia nitombo ny 12% avy amin'ny 1993-2002. Ankehitriny, Etazonia dia manana ny ankamaroan'ny mpisolovava manerantany. Indrindra fa ny 80% amin'ireo mpahay lalàna manerantany eto Etazonia. Manana ihany koa ny ankamaroan'ny lalàny. Raha ny tena izy ny US dia manana sangisangy 96% amin'ny hetsik'izao tontolo izao. Maro amin'izy ireo no tsy mahay mandanjalanja. Tokony hiaro ny fanananao ho laharam-pahamehana izany.
Araka ny fantatry ny maro, dia ny fanenjehana tsy misy dikany na dia diso aza izany, dia mety hanimba ny fahasalamana ara-bola ny olona iray. Izay no izy raha mahomby na tsia ny fitoriana. Ny sarany ara-dalàna tokony hiarovana ny raharaha iray dia mety ho lehibe. Vokatr'izany dia mora kokoa ny manipy ara-bola amin'ny mpampanoa lalàna hanonganana ny fitoriana. Amin'ny alàlan'ny fametrahanao ny fanananao ao amin'ny kaontin'ny banky any ivelany dia miaro ny tenanao amin'ny mpisolovava ratsy toetra sy ny lalàna mifono ahiahy ianao. Izany dia satria tsy ny fanananao ao amin'ny fahefana hafa noho ny ao amin'ilay misy anao. Fa ny lalàna momba ny tsiambaratelo tena henjana dia mifehy ny banky.
Fiarovana izay anao
Ny haavon'ny fiarovana ny fananana sy ny fiainana manokana izay omen'ny kaonty any ivelany dia tena manakiana tokoa. Izany dia tolotra be ho an'ny tompona orinasa izay te hiaro ny zavatra azony. Misy fitambaran ny tsiambaratelo momba ny banky sy ny fitazonana fananana eo ambany fifehezana ara-dalàna izay sarotra tanterahina. Ireo sakana roa ireo dia hanakivy ny mpisolovava maro izay manenjika anao. Izany dia noho ny fahasarotana mafy amin'ny fahazoana ireo “trano mandoa vola amin'ny karama.”
Zava-dehibe ny manamarika fa ny fiarovana ny fananana dia tsy tanterahina fotsiny amin'ny kaonty any ivelany. Ny antony dia io. Raha mitazona ilay kaonty ianao, ny mpitsara iray dia afaka mandidy anao hitondra vola avy amin'ny kaontinao any ivelany. Raha misy lehilahy manao akanjo mainty mihazona gavel dia manome ny baiko izy avy eo, dia mety hanery anao hanao izany izy.
Zava-dehibe aminao ve ny fiarovana amin'ny raharaha? Raha izany no izy, dia ilaina ny mitazona ny kaonty amin'ny fitokisana fiarovana fananana any ivelany miaraka amina mpanatanteraka fahazoan-dàlana. Izany hoe, mitazona vola ao anaty fahatokisan-tenanao, arovan'ny mpiambina manana fahazoan-dàlana sy manana antoka ary malaza. Izany dia satria rehefa manao izany ianao dia mamadika ny latabatra. Ny mpitandrina dia mipetraka eny amoron-dranomasina. Noho izany, tsy manam-pahefana ny mpitsara eo an-toerana mba hanery ny mpitokona vahiny hanaraka.
Misy tombontsoa ankoatra ny fitomboan'ny tsiambaratelo. Ny kaonty any ivelany dia manome fahalalahana lehibe kokoa noho ny kaontin'ny banky an-trano. Ny kaonty ao an-trano dia mety handrara anao handray anjara amin'ny serivisy fitantanana harena. Saingy ny banky any ivelany dia afaka manokatra ireo tombontsoa ara-bola mahasoa sy mahasoa. Misy antony iray lehibe ananan'ireo loharanom-bola fampiasa amin'ny banky any ivelany sy ny mpanjifany. Izany dia satria tsy dia misy ny firotsahan'ny governemanta amin'ny raharaham-bolan'ny faritra maromaro.
Amin'ny alàlan'ny kaonty banky any ivelany dia afaka mahazo tombony amin'ny fampiasana vola iraisam-pirenena ianao. Afaka manao izany amin'ny vola hafa ianao. Miampy ianao dia afaka mahazo ny tahan'ny fifanakalozana bebe kokoa amin'ireo vola ireo. Ny fahazoana kaonty any ivelany dia manokatra ny fahafaha-varotra eo amin'ny sehatry ny orinasa tsy hita any amin'ny faritany sasany. Noho izany, ny banky any ivelany dia ahafahan'ny fampindram-bola mora kokoa amin'ny tsena vao misondrotra sy ny firenena mandroso. Io dia mamela ny mpampiasa vola handray fiverenana tsara kokoa amin'ny fampiasam-bolany noho izay mety ho azony any an-trano. Misy tombony amin'ny fampiasam-bola sy ny raharaham-barotra amin'ny kaonty any ivelany. Izany dia mety tafiditra amin'ny fitazonana portfolio portfolio tsena sy / na metaly sarobidy. Ankoatr'izay, matetika dia misy vidiny mahaliana kokoa atolotry ny tompon'ny kaonty.
Inona no safidy? Banky Amerikana na Banky Afrikana?
Tombontsoa hafa azo avy amin'ny fananana kaontin'ny banky any ivelany fa hoe any amin'ny sehatra maro dia tena mitoetra ny banky. Ankehitriny fantatro izay mety hoeritreretinao izao: "Ahoana no azo atao?" Ny fahamarinana mazava momba an'io raharaha io dia eo anelanelan'ny 2008 sy 2012, misy banky 465 Etazonia tsy nahomby. Ankoatr'izay, ny fanadihadiana farany fanao isan-taona nataon'ny Global Finance dia nahitana izany. Amin'ny banky tsara indrindra eran-tany 50 ny banky amerikana telo (3) ihany no nanao ny lisitra. Tsy nisy banky amerikana iray akory tao amin'ny banky azo antoka 30 ambony indrindra. Tsy iray. Raha jerena amin'ity lisitra ity dia ny banky ambony indrindra azo antoka 10 eto amin'izao tontolo izao dia samy tany Eropa avokoa.
Ankehitriny, tsy midika akory izany fa ny indostrian'ny banky amerikana dia eo am-pamaranana. Izany hoe, ny fianjerana ara-toekarena dia tsy voatery atao manodidina ny zoro. Ireo statistika ireo dia mampiseho tsotra izao fa misy firenena any ivelany izay manome fahamarinan-karena betsaka kokoa noho ny Etazonia. Matetika izany amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny banky izay mitaky ireo fifandanjana mahery vaika. Fanampin'izany, maro amin'ireo andrim-panjakana ireo no manome fiverenana tsara kokoa amin'ny tompon'ny kaonty ary manome fampiasam-bola midadasika. Ny haavon'ity fitomboana ity dia mamela ny tompona ny kaonty mba hizarazara ny fananany. Manome azy ireo fahafahana hahafahany miaro kokoa ny fananana sy miambina ny tsiambaratelo ara-bola koa izy ireo.
Banky tsotra fotsiny
Farany, ny ankamaroan'ny olona dia manana hevitra fa ny fahazoana kaonty any ivelany dia dingana lava sy sarotra ary manahirana. Mihevitra izy ireo fa ho an'ny olom-bitsy ihany no voatokana ho azy; ho an'ireo izay afaka mandoa mpisolovava lafo be sy saram-pananganana hametraka kaonty ivelany. Mety ho marina tokoa izany am-polony taona lasa izay rehefa nanamboatra kaonty tany amoron-dranomasina tany ivelany. Fanampin'izay, lafo izy ireo noho ny filàna andehanana mankany amin'ny banky. Saingy tonga eo ny fahaterahan'ny taona niomerika ary ny fampiasana solosaina mifandray amin'ny Internet. Noho izany, ankehitriny, ny fahazoana sy fanaraha-maso ny kaonty any ivelany dia saika mora tahaka toy ny fandefasana kaonty amin'ny banky an-trano.
Amin'izao vanim-potoana iainany izao sy momba ny olon-dehibe rehetra dia afaka manao fangatahana kaonty any ivelany. Olana tsotra ny hifandraisana amin'ireo mpanentana mahay toa ny fikambananay. Ny internet dia nanala ny firoboroboan'ny kaonty any ivelany. Namorona tontolo iainana izay azon'ny tsirairay ampiharina. Ny olona rehetra dia afaka mitana kaonty nefa tsy mila mandoa vola be sy manodin-dalàna amin'ny mpisolovava. Fanampin'izany, tsy misy fepetra takiana mivezivezy any amin'ny toeran'ny banky amoron-dranomasina amin'ny faritany maro. Ny serivisy izay omen'ny banky eo amoron-dranomasina no azo idirana amin'ny rehetra. Noho izany, mora kokoa ny hampiharina amin'ny kaonty any an-tsisin-taona ary hiasa ny tombontsoa mihoatra ny heverin'ny olona iray.
Banky any ivelany: Ho anao ve?
Ny kaonty any ivelany dia nohodidinin'ny mistery maro tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay. Ny olona salanisan'ny olona dia mino fa ny banky ihany no manankarena amin'izany tombontsoa izany. Raha ny fahitan'izy ireo dia hitan'izy ireo fa ho an'ny olon-kafa ihany ny tombontsoa rehetra. Izany no iray amin'ireo finoana fa faly isika milaza fa tsy marina. Misy tombony ho anao koa.
Ny tombontsoa azo amin'ny fiainana manokana, ny fiarovana ny fananana, ny fahamarinan'ny andrim-panjakana, ary ny fahafaha-manao amin'ny banky any ivelany dia azo alaina amin'ny olon-drehetra. Vola mpandraharaha ve ianao fa miaro ny fananany? Moa ve olona te hiditra amin'ny fampiasam-bola mahasoa amin'ny tsena vahiny? Raha izany no izy dia manampahaizana manokana momba ny fiarovana ny fananana dia manolo-tena hitady ny fahazoana kaonty any ivelany.
Banky mahaleotena sy fiarovana ny Banky Offshore
Ny tsiambaratelo momba ny banky sy ny filaminana no tena manahy. Laharam-pahamehana izany tsy hiarovana anao sy ny volanao. OffshoreCompany.com dia manome soso-kevitra tsy tapaka amin'ny andrim-panjakana banky mandray anjara amin'ny rafitra banky foibe. Ny rafitra dia fehezina. Mampihatra ireo fomba fanao amin'ny kaonty henjana, izay manome fotodrafitrasa matanjaka sy fanaraha-maso mahaleo tena ho an'ny banky any ivelany.
Betsaka ny andrim-panjakana manome kaonty amin'ny banky ivelany sy tsy miankina amin'ny fanjakana amerikanina sy vahiny ary tompon'andraikitra eo an-toerana. Ny andrim-panjakana dia manome asa ary manohana ny toekarena eo an-toerana. Izany hoe, ny seha-piainan'izy ireo dia miankina amin'ny sehatry ny serivisy ara-bola. Vokatr'izany dia maharitra sy maharitra ny lalàna momba ny tsiambaratelo sy ny fiarovana ara-bola. Ilaina ny manantitrantitra fa izay rehetra mety ho mpanjifa dia manao safidy tsara amin'ny fahefana. Izahay dia manao fikarohana be dia be amin'ireo mpanome kaonty any amin'ny banky any ivelany. Ambonin'izany, faly izahay manome anao fanazavana mahasoa hanampiana anao amin'ny fanaovana safidy mety.
Ireo banky amoron-tsiraka any amin'ny firenena sasany dia mandray anjara amin'ny rafitra fiantohana fiarovana ara-bola. Raisin'izy ireo tsara ny fiarovana sy ny fiainana manokana. Ny manara-dalàna dia manamafy mafy fiarovana amin'ny banky any ivelany. Izy ireo dia manamafy tsara ny lalàna. Izany hoe, voafetra ny lalàna izay fizaran'ny banky fampahalalam-baovao amin'ireo antoko fahatelo, ao anatin'izany ny governemanta vahiny. Mazava ho azy, ny lalàna dia mamela ny mpanome kaonty amin'ny banky any ivelany izay hizara vaovao amin'ny tranga mahery setra amin'ny asa ratsy na fampihorohoroana. Tsy sarotsarotiny fotsiny ny tsiambaratelo amin'ny banky.
Private Banking Privacy
Any Switzerland, ohatra, ny lalàna dia manasazy mafy izay mpiasa mandika ny fiainana manokan'ny mpanjifa. Tafiditra ao ny fandoavan-ketra sy ny fotoana an-tranomaizina. Noho izany dia manaja fatratra ny tsiambaratelo ny tsiambaratelo. Marihina ihany koa fa tsy manana sampana an-trano ny banky vahiny. Izany dia satria ny sampana ao an-trano azo iharan'ny sazy mandra-pitokisan'ny sampana vahiny ny vola. Iza amin'ireo banky no manana fitambarana tsara indrindra momba ny fiarovana, filaminana, fidirana an-tserasera ary manaiky an-kalalahana ireo mpanjifa vahiny? Izany no misy orinasa iray manatrika azy ity. Ampiasao fanampiana ny isa na ny pejy eto.
Indreto misy rafi-pitsarana sasany izay ivotoerana ara-bola tsy miankina amin'ny fanjakana:
Nosy Channel (Jersey sy Guernsey)
OffshoreCompany.com dia namolavola fifandraisana maharitra amin'ny banky any ivelany. Manatanteraka famerenana tsy tapaka izahay, amin'ny fahazotoana ilaina sy ny fivoriana ataon'ny olona. Ny fanaovana izany dia manampy amin'ny fiantohana fa ny kaontin'ny banky any ivelany izay ampianay ny mpanjifan'ny hanorina dia azo antoka sy azo antoka. Mangataha fanampiana aminay raha mila fampahalalana bebe kokoa na hanokatra kaonty any amin'ny banky amoron-dranomasina azo antoka.
<Ho an'ny toko 4
Ho an'ny toko 6>